Soft zokuzivikela phambili coat ne ezinemikhono emide kanye ezinemikhono emide - China Shandong Chen lu
Soft zokuzivikela phambili coat ne ezinemikhono emide kanye ezinemikhono emide
Yenziwe iraba zemvelo, ophuzi danfen futhi lusetshenziswe ngu ukucubungula.
okulingana Ukuhola: 0.25 MMPB, 0.35 MMPB, 0.5mmpb, noma ehlukile yokuvikelwa okulingana kuye ngezimo ezikhethekile. Ikakhulu esetshenziselwa Ukuvikelwa-X-ray, abasebenzisi ungakhetha ezahlukahlukene imikhiqizo ukuvikelwa chungechunge. Yangaphakathi international impahla multi-ungqimba entsha zokuzivikela, kakhulu ukusebenza Ukuvikelwa;
Usayizi: S, M, L, Izinombolo ekhethekile kungenziwa egcizelele.
Shandong Chen lu yezokwelapha ithuluzi co., LTD iyinkampani onguchwepheshe ukukhiqizwa X-ray izingubo ezivikelayo (phambili iraba izingubo) wamabhizinisi ezinkulu, kuhlanganise uhlobo olusha-X-ray izingubo ezivikelayo iwine kumkhakha patent kazwelonke, inkampani ziqu ephelele kungenziwa qiniseka ukuthenga! Sicela uxhumane nathi ukuze uthole imininingwane!
Yocingo: 0535-8982222 / 8522678
Previous: uhlobo olusha Chen lu sika lomthofu zokuzivikela Ukuvikelwa ingalo ingalo
Olandelayo: I soft zokuzivikela phambili tank limelene bafake
Izingubo Lead Ukuze X Ray Ukuvikelwa
Izingubo Lead Inani
Ukuhola nezingubo zokuzivikela
Hola Avikelayo Series
Ukuhola Rubber Jacket
Long emikhonweni phambili elingenamikhono ngakolunye uhlangothi
Medical Lead nezingubo
Medical Lead Izingubo Avikelayo
Medical-Ray Avikelayo Imikhiqizo
Nuclear Kushisa bhé kule ndawo Avikelayo
Kushisa bhé kule ndawo Ukuvikelwa Lead nezingubo
Kushisa bhé kule ndawo Ukuvikelwa Imikhiqizo
Radiology Ukuvikelwa Izingubo
Ray Kushisa bhé kule ndawo Izingubo Ukuhola
Soft emkhonweni eside phambili elingenamikhono
X Ray Hola nezingubo
X Ray Avikelayo Izinsiza kusebenza
X-Ray Ukuvikelwa Hola gown
X-Ray Isihlangu Gonad
Chen lu sika ivesti ngemisebe-ubufakazi has s okuhle ...